မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: KNU နှစ် အစိုးရ ၁၂-၁-၂၀၁၂ ရက်နေ.တွင်ဖားအံ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဟုဆို
KNU နှစ် အစိုးရ ၁၂-၁-၂၀၁၂ ရက်နေ.တွင်ဖားအံ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဟုဆို
မြန်မာ အစိုးရနှင့် KNU တို. ဖားအံမြို.မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုမည် ဟု KNU မှ လာ သောသတင်းတစ်ရပ် ကဆိုပါတယ်။
မြန်မာ အစိုးရ၀န်ကြီး အဖွဲ.နဲ. ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို.မှာ တွေ.ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေ ယခုလို သဘောတူညီခဲ့ ကြတာဖြစ်တယ်လို.သိရတာပါ။
နှစ်ဘက်အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲ နိုင်ဖို. ရည်ရွယ်တဲ့ အစည်းဝေး တစ်ရပ်ကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းထိုင်းထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေ ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအစည်းအဝေး ကနေ ၁၂-၁-၂၀၁၂ ရက်နေ.မှာ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ. ဖားအံမြို.မှာ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်မယ်လို. သဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သဘောတူညီမှုတွေထဲက အမြင့်ဆုံးအချက်ကတော့ အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲဖို. ဖြစ်နိုင်တယ်လို. ခန်.မှန်းနိုင်ကြောင်း ထိုင်းထောက်လှမ်းရေး သတင်းရပ်ကွက်က ပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မြ ရန်ကုန်မှာ ဗိုလ်ခင်ညွှန်.နဲ. တွေ.ဆုံပြီး နောက်ပိုင်း သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါ တယ်၊ KNU နေနဲ. မြန်မာပြည်ထဲကို ပြန်ဝင်တော့မယ် ဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို.မှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရေးလောက ကို ထိမ်းချုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့သလို မဲဆောက်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ.အစည်းများ ရဲ့ တော်လှန်ရေး ဟာ ဘာလည်း ဘယ်လဲလို. မေးရမဲ့အခြေအနေ ရောက်သွားမဲ့အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံရေးလောကရဲ့ အမြင့်ဆုံးတပ်ပေါင်းစု ဖြစ်တဲ့ NCUB ရဲ့ တည်ရှိမှုကလည်း ပျက်ပြယ်သွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ NCUB ဟာ တိုင်းရင် သားများအဖွဲ. DAB, ပြည်ပရောက် အစိုးရ NCGUB ပြည်ပရောက် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ MPU နဲ. ပြည်ပရောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ချုပ် NLD (LA) တို.နဲ. ဖွဲ.စည်းထားတဲ့ အကြီးဆုံးသော တပ်ပေါင်းစုဖြစ်ပါတယ်။
NCUB ဟာ အဖွဲ.အစည်းများစွာပါဝင်တဲ့ တပ်ပေါင်းစုဖြစ်ပေမဲ့ KNU ကသာ အမြဲတမ်း ကြီးစိုးချယ်လှယ်တဲ့ အဖွဲ.အစည်း တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် NCUB ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကတော့ နိဂုံးချုပ်သွားပြီလို.ပြောနိုင်ပြီဖြစ် ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ. အစည်းအချိုကတော့ NCUB ကိုဖျက်သိမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒရှိကြပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို. သဘော ထားကတော့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနဲ. ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှ NCUB ရဲ့ ရှေ.ရေးကို ဆုံးဖြတ် သင့်တယ်လို. ယူဆပါတယ်။
KNU ရဲ့ ထိမ်းချုပ်မှုသာထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို.မှာ အဓိကကျတဲ့ ထိမ်းချုပ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အမှန်တကယ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ. အစည်းများရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုဆိုတာလည်း NCUB ကိုထိမ်းချုပ်ထားတဲ့ KNU မှာပဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိလူကြီးတွေဟာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း မှာပေါ်လာတဲ့ လူငယ်အဖွဲ.အစည်း တွင်း ခြစားမှုတွေကို တိုင်ကြားပေမဲ့လည်း လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အချို.အဖွဲ.အစည်းများဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ညီလာခံမခေါ်ပဲ လူသုံး လေး ယောက်နဲ. စခန်းသွားပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်နေတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံခြေစိုက်အဖွဲ. အစည်းများကို NCUB ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ.သာ ပြည်ပ NGO များကထောက်ပံ့လေ့ရှိပြီး ယခုအချိန်မှာ NCUB မရှိရင် ဘယ်သူက ထောက်ခံမှုပေး မလဲဆိုတာ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ KNU ဟာ သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပုဂိုလ်များပါဝင်တဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက် အထူးကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ.စည်း နိုင်ခဲ့ဖို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံခြေစိုက် အဖွဲ.အစည်းများကို စည်းကမ်းသစ်များနဲ. ပြန်လည်ဖွဲ.စည်း နိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by BURMA STATEMENT at 4:50 AM